Sonkortu waxa ay kordhisaa halista haleelitaanka kansarka naasaha iyo sambabada - Horn Future
Sonkortu waxa ay kordhisaa halista haleelitaanka kansarka naasaha iyo sambabada
Cilmi baadhayaal Maraykan ah ayaa daraasad ay sameeyeen kusoo gunaanaday in sonkortu ay saamayn ba’an ku leedahay caafimaadka oo inta badan dadku aynan u maleeyeenin,tasoo ay dhici karto in sonkortu ay kordhiso halista kansarka naasaha iyo sanbabada.
Sida laga soo xigtay website ka “Oogspergh Allgemeine” daraasadan ayaa waxa sameysay Jaamacadda Texas taasoo lagu daabacay majjalad cilmiyeedka “Cancer Research” ee America.
Daraasadan ayaa waxa ay muujisay in isticmaalka badan ee xad-dhaafka ah ee sonkortu in ay kordhin karto halista kansarka naasaha iyo sanbadada, sidoo kale waxa ay shaaca ka qaaday in isticmaalkeeda badan ay sababi karto cuduro kale oo kansarka ah.
Cilmi baadhayaashan ayaa waxa ay ku ogaadeen natiijooyinkan tijaabooyin ay ku sameeyeen tiro kamid ah jiir xaruntan gaar ay uga dhigtay baadhitaanka cudurada kansarka.
Cilmibaadhayaalkan ayaa waxa mudo 6 bilood ah jiirkan ay tijaabada ku hayeen ay siinayeen cunto ay ku jirto qaybo kala duwan oo sonkor ah, waxana natiijada daraasaddani ay muujisay in jiirkii la siinayay cuntada ay sonkortu ku badan tahay ay korodhay burooyinkiisu,iyada oo kadibna ay u gudubtay sambabbada.
Daraasadan ayaa waxa sidoo kale ay muujisay kor u kaca heerka kansarka naasaha 58% in jiikii la siiyey cuntada hodan ku ah( fructose) oo ah maadu kujirta sonkorta, halka jiirkii la siiyey cunto aynan ku badnayn madadani uu haleelay heerka 30%, sida uu qoray website ka, “T-Online” ee Germany.
Cilmi baadhayaashu waxa u sabab uga dhigeen faafidda burooyinka jiirkan quutay cuntada macaan ee sonkorta leh,taasoo kordhisay soo saarka maadada (enzyme) ee ah “12-LOX” iyo acidka dufanka ee “12-HETE” ee unugyada kansarka, iyada oo labadan arrimood ay qayb ka qaataan koboca kansarka naasaha.
Sida laga soo xigtay website-ka “Gesundheit” ee Germany ee ku takhasusay arrimaha caafimaadka,ayaa sheegay daraasad cusub oo la sameeyay in ay muujisay in maadada (fructose) ee ku jirta sonkorta cad ee maalin kasta la isticmaalo ee (sucrose) ay door muhiim ah ku leedahay halista haleelitaanka kansarka,taasoo kordhisa soo saarka acidka dufanka ee “12-HETE” ee burooyinka naasaha, iyada oo sidoo kale sababta in ay u gudbiso sambabada.
« Cabitaanka gaaska leh waxa ay kordhiyaan baruurta caloosha iyo dhexda	» Sudan, Ethiopia to complete border demarcation this year